Umama uzothola ukuthula ngemuva kokuba umbulali wendodakazi yakhe egwetshwe iminyaka engama-20 | Scrolla Izindaba
Umama uzothola ukuthula ngemuva kokuba umbulali wendodakazi yakhe egwetshwe iminyaka engama-20
“Ekugcineni sesingalala ngokuthula.”
Yileyo ndlela uSellwane Tyumbo akhulume ngayo ngemuva kwesigwebo seminyaka engama-20 sowesilisa owabulala indodakazi yakhe.
UTshokolo Mohlafu, oneminyaka engama-35, ugwetshwe ngoLwesihlanu ngecala lokubulala uLiza Tyumbo, oneminyaka engama-23, owayekhulelwe, wase-Reddersburg, e-Free State.
UTshokolo wagwaza wabulala umama wengane yakhe engakazalwa mhla zingama-29 kuNhlolanja ngowezi-2020.
ULiza ubenezinyanga eziyisishiyagalombili ekhulelwe ngesikhathi ebulawa kubangwa imali kamashonisa.
Lezi zithandani bese zithandane iminyaka emihlanu kanti bezilindele ingane yazo yesibili. Bebekweleta umashonisa imali eyizi-R2,800.
“Indodakazi yami yatshela uTshokolo ukuthi akakhokhe imali ukuze ezokwazi ukuthola amakhadi akhe asebhange kumashonisa,” kusho uSellwane.
“Lokho kudale ingxabano iyaholela ekutheni uLiza agwazwe abulawe. Ngiyajabula ukuthi ususiwe emphakathini.”
Okhulumela amaphoyisa uBrigadier Motantsi Makhele unxuse abantu ukuthi bayeke ukunikeza omashonisa amakhadi abo asebhange.
“Ngokomthetho, akekho umuntu ovumelekile ukugcina ikhadi lomuntu noma ngabe umkweleta imali,” kusho uMakhele.
Okhulumela i-NPA e-Free State uPhaladi Shuping ukuqinisekisile ukuthi iNkantolo eNkulu i-Free State Division igwebe uTshokolo Mohlafu isigwebo seminyaka engama-20 ngokubulala intombi yakhe ekhulelwe. Lo msolwa oneminyaka engama-35 wase-Mokoai Moletsane, e-Reddersburg, ugwetshwe ezinye izinyanga eziyi-12 ebhadla ejele ngecala lokushaya ngenhloso yokulimaza.
“UMohlafu usole uTyumbo ngokungamhloniphi wase emgwaza amanxeba amahlanu. UTyumbo wayenamasonto angama-35 ekhulelwe. UMohlafu wabaleka waboshwa ngemuva kwenyanga, ”kusho uShuping.